माधव नेपालले हाले प्रेम आलेमाथि सौता, के हो रहस्य ? — Imandarmedia.com
माधव नेपालले हाले प्रेम आलेमाथि सौता, के हो रहस्य ?
काठमाडौ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आले मन्त्री बन्नकै लागि फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिए। देउवालाई विश्वासको मत दिएर माधव नेपालको खेमामा लागेका आले पार्टी फुट्दा पनि नेपाललाई साथ दिए।
नेपाललाई साथ मात्र दिएनन् एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन सफल भए। पार्टी निमार्णमा यति ठूलो योगदान गरेका आलेलाई माधव नेपालले भने वेवास्ता गरेका छन् । उनले आलेमाथि सौता हालेका छन् ।
राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सांसद शेरबहादुर कुँवर र आलेलाई आलोपालो मन्त्री बनाउने भएपछि ओलमाथि सौता हालेका हुन् । सांसद प्रेम आलेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएर माधव नेपालको साथमा बढी सांसद रहने अवस्था बनाए पनि भीम रावलको झाँको झार्नलाई पनि कुँवरलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने छ ।
राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सांसद कुँवर अछामका हुन् । उनको पदावधि २० फागुन २०७८ सम्म छ । त्यसैले ६ महिना उनलाई मन्त्री बनाउने प्रयास समेत भएको छ । प्रेम आलेलाई पछि बनाउने गरी सहमति गर्न खोजिएको बुझिएको छ । तर, आले पहिलो लटमै मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । नेकपा एसभित्र आले र कुँवरलाई आलोपालो गराउने प्रयास पनि चलेको छ ।
मन्त्रीको दौडमा प्रतिनिधि सभाका २३ मध्ये २१ जना रहेका छन् । सबैको पालो पुर्याउने गरी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् । आलोपालो मन्त्री बनाएर सहमति निकाल्ने तयारी नेपालले गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एस सबैभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेशसभामा पनि नेकपा एस पहिलो ठूलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधि सभा सदस्यले पनि अन्तिम समयमा माधव नेपाललाई साथ दिए ।
यसै गरि, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको हरि विजोग भएको छ । उनको आफ्नै जन्मथलो गुल्मीमा उनको हरिविजो भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्ने जनप्रतिनिधि शून्य भएपछि नेतृ झाँक्रीलाई जिल्लामा नाक देखाउन मुस्किल भएको छ ।
गत भदौ १ गते एमाले विभाजन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न निर्वाचन कार्यालयले भदौ २२ गतेसम्मको समय दिएको थियो। एमाले विभाजनपूर्व दुबै समूहका प्रभावशाली नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्टको गृह जिल्ला रहेको गुल्मीमा दुबै नेताहरू एमालेमै रहेपछि एकीकृत समाजवादीमा जाने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या शून्य भएको हो।
त्यस्तै, साबिक लुम्बिनीका कपिलवस्तु, पाल्पा र पश्चिम नवलपरासीबाट भने एकरएक जना जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेका छन्। कपिलवस्तुमा शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ८ देवीपुरकी कार्यपालिका सदस्य निर्मला सुनारले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेकी छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख ज्ञानीराम पुरीले कपिलवस्तुमा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीमा एकरएक जनाले सनाखत गरेको जानकारी दिए। सुनारले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोज्दा शिवराज नगरपालिका १० कि वडाअध्यक्ष मन्जु मिश्राले जनता समाजवादी छोडेर लोकतान्त्रिक समाजवादी रोजेकी हुन्।
त्यस्तै, पाल्पाबाट रम्भा गाउँपालिकाका एक जना जनप्रतिनिधीले मात्रै नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रम्भा गाउँपालिका वडा न ५ का सदस्य इश्वरी श्रेष्ठले नेकपा एमाले छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका हुन्।
श्रेष्ठले समाजवादी रोजेपछि माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेको गृह जिल्लामा नेकपा एकिकृत समाजवादी निल हुनबाट जोगिएको छ।त्यसैगरी, पश्चिम नवलपरासीमा बर्दघाट नगरपालिका वडा न ९ का अध्यक्ष चन्द्रकान्त चापागाईंले नेकपा एमाले त्यागेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।
चापागाईंसँगै बर्दघाट वडा नं। २ का सदस्य कृष्णप्रसाद पाण्डेले पनि एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेकोमा पछि फिर्ता लिएका छन्।जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुजाता खत्रीले सनाखत फिर्ता स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त पत्र आयोगमा पठाउने बताइन्।
त्यसैगरी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी त्यागेर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा जाने जनप्रतिनिधि भने शून्य भएको छ।उता अर्घाखाँची जिल्लामा भने ६ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्।जिल्लामा पाणिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमसहित ६ जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेका छन्।
गौतमसहित शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का सदस्य गोविन्दप्रसाद पोख्रेल, शितगंगा नगरपालिका १३ का वडा सदस्य जिवलाल क्षेत्री, पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का सदस्य ओमप्रकाश भुसाल, सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर १ की महिला सदस्य सुमित्रा मुखिया र मालारानी गाउँपालिका ५ का सदस्य डालबहादुर चौहानले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादी रोज्ने कुल ७१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा धेरै दाङबाट २१ जनाले एमाले छोडेका छन्। त्यसैगरी, बाँकेमा ११, रुपन्देही र प्युठान समान ७÷७, बर्दिया ६, रुकुमपूर्व र रोल्पाबाट ५÷५ जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेको पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज भागवत विश्वासीले बताए।
प्रतिनिधिसभाको बैंक आज बस्दै छ । यो बैठक नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठक हो । बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने छ ।बैठकमा एक दर्जन बढी अध्यादेशहरु स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के गर्ला एमाले ? यस्तो भन्छन् नेता
एक दर्जन बढी अध्यादेशहरु स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने पनि आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश छ । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेश गर्ने छन् ।
यसैगरी नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पनि प्रस्ताव पेश हुने छ ।
यसैगरी सपथ सम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन सम्भावित कार्यसूची छ ।
त्यस्तै, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
बैठकमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित जुठबहादुर खड्गी (जेबी टुहुरे)को निधनमा शोक प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद संचालनमा रोक लगाउने संके गरेको छ । एमालेले कारवाही गरेका पठाए १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुखको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेका छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङले सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसैगरी प्रतिपक्ष एक्सनमा उत्रिने बताए । अहिले संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने केही योजना नभएपनि सरकारको प्रस्तुतीले सबै कुराको जवाफ दिने उनको भनाई छ ।